China LED Desk Lamp miaraka amin'ny Night Light ho an'ny fampiasana an-trano Famokarana sy orinasa | Kennedy
Jiro birao azo rechargeable miaraka amin'ny seranan-tsambo USB: Miaraka amin'ny universal USB charging cable, mba hahafahanao mameno ity jiro kely amin'ny birao ity miaraka amin'ny adaptatera USB, banky herinaratra, birao, solosaina rehefa mandrehitra azy, mitahiry fotoana hiandrasana.
Jiro fianarana azo esorina sy azo aforitra: miaraka amin'ny flexibility 360°, ny jiro gooseneck dia ahafahanao manazava amin'izay ilainao. Azo aforitra ho jiro kely koa izy io mba tsy handaniana toerana be loatra rehefa mandeha
Jiro LED mitsitsy maso sy mitsitsy angovo: tsy misy flicker, tsy misy faritra maizina, arovy ny masonao amin'ny havizanana. 12 volana ny fiantohana dia omena ho an'ity jiro portable ity, ary raha manana olana ianao dia alefaso mailaka izahay hamaha
Mitsitsy angovo sy USB Charging: Batterie voamarina, jiro mitohy, fanjifana herinaratra ambany, fiainana lava. Misy tariby USB charging, azonao atao ny manefa amin'ny alàlan'ny herinaratra finday, solosaina finday, charger finday, sns. Mora entina sy mitahiry izany, ary azo ampiasaina ho jiro vonjy maika mandritra ny fahatapahan-jiro.
Fanamboarana tsara tarehy sy kanto: Ankafizo ny fanorenana tsara tarehy manerana izao rehetra izao izay mety amin'ny toe-javatra rehetra: asa, fianarana, na latabatra eo am-pandriana.
Serivisy matihanina: Warranty 1 taona tsy misy ahiahy, serivisy mpanjifa 24 ora. ( Orinasa matihanina amin'ny jiro miasa amin'ny famolavolana sy ny fampivoarana ny jiro isan-karazany Eco-Friendly, Energy-Efficient ary Safe izahay. Handray ny andraikiny amin'ny mpanjifanay tsirairay izahay ary hanao izay tsara indrindra vitantsika hamaha ny olana rehetra nitranga nandritra ny dingana.)
Jiro birao rechargeable miaraka amin'ny 3.5" mini fan
Batterie: 3.7V 1800mAh batterie lithium azo averina
Jiro LED: 4W hazavana mafana LED desk lamp
Fonosana: 1 pcs/box, 36 pcs/carton
Haben'ny baoritra: 62.3x36x40cm
Jiro birao azo rechargeable
Jiro LED: 4W fotsy jiro LED + 4W mafana hazavana LED famirapiratry ny Adjustable
Light Dimmer: 10% -100%, fanitsiana ny famirapiratana lava
Haben'ny baoritra: 67x50.5x35.5cm
Jiro LED: 10W fotsy jiro LED + 10W mafana jiro LED famirapiratry ny Adjustable
Jiro LED azo rechargeable
Jiro LED: 7W fotsy jiro LED + 7W mafana hazavana LED famirapiratry ny Adjustable
Fahazavana maivana: 10% -100%
Haben'ny baoritra: 50.5X45.2X52cm
Batterie: 3.7V 2000mAh batterie lithium azo averina
Jiro LED: 4.5W fotsy jiro LED + 4.5W mafana hazavana LED famirapiratana azo amboarina
Haben'ny baoritra: 42x42x43.5cm
Batterie: 4V2000mAh Batterie Rechargeable
Jiro LED: 2X12W LED, famirapiratana azo amboarina
Cable na plug: Miaraka amin'ny tariby AC
Haben'ny baoritra: 69.5x55.9x36.5cm
teo aloha: KENNEDE 360 LED Camping Lantern ho an'ny fampiasana ivelany
Manaraka: Pedestal fan, Oscillating Fans, Electric Fan, Adjustable Mijoro Fanorenana